kimistari – Garanuug
Home / Tag Archives: kimistari
Tag Archives: kimistari
Atam (Atom, الذرة)
August 15, 2015	Abwaan, Saynis 0 4,117
Maatar–ku waxa uu ka samaysan yahay saxarro aad u yaryar oo lagu magacaabo Atam. Hal tin ayaa waxaa lagu qiyaasaa in ballaadhkeedu yahay hal milyan oo atam. Atamka qudhiisu waxa uu ka kooban yahay saddex qaybood: borotoon, niyutroon iyo elektoroon. Atamku waxa uu leeyahay badhtame ama bu’ halkaas oo ay ...
August 14, 2015	Abwaan, Saynis 0 4,797
Aqoonteennu inta ay gaadhsiisan tahay uunku waxa uu ka samaysan yahay maatar iyo tamar. “Wax kasta oo cuf iyo culays leh oo meel bannaan buuxin kara” ayaa maatar lagu magacaabaa. Si kale haddii aan u dhigno, wax kasta oo aad taaban kartid waxaa la dhihi karaa waa maatar. Sidaas awgeed, dhagaxa, ciidda, geedka, ...
March 30, 2017	41,767
May 30, 2016	21,981
April 1, 2017	21,656
February 26, 2017	18,442
July 24, 2016	17,801